पोल्यान्डको वारसवामा जन्मिएकी को हुन् म्याडम क्युरी ? | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
पोल्यान्डको वारसवामा जन्मिएकी को हुन् म्याडम क्युरी ?
पोल्याण्डको वार्सामा ७ नोभेम्बर १८६७ मा जन्मीएकी मेरी क्युरी बिश्व प्रसिद्ध भौतिक तथा रसायन शास्त्री हुन । तत्कालिन अवस्थामा महिलाहरु लाई दिइने सीमित शिक्षा लाई तोड्दै उनले आफ्नै दिदीको सहायताले गणित पढ्न फ्रान्सको पेरिस जाने सौभाग्य प्राप्त गरिन ।
निकै कठिन परिश्रम र समर्पण मार्फत आफूलाई विज्ञानको क्षेत्रमा अब्बल प्रमाणित गर्दै पेरिस बिश्वबिद्ध्यालयको प्राध्यापक बन्न सफल भइन । आफ्नै बिश्वबिद्ध्यलयमा उनको भेट प्राध्यापक पियर क्युरी संग हुन पुग्यो । उनिहरुको त्यही भेट नै प्रेममा परिणत भएर दाम्पात्य जीवन सुरु भयो । यो एक किसिमले भन्दा संयोगक पनि थिया, मेरी क्युरीको जीवनमा
यो बैज्ञानिक दम्पतीले सन् १८९८ मा पोलोनियमको खोजी गरे । त्यसकोे केही समय पश्चात रेडियमको खोजी गर्न सफल भए । जुन पछी गएर चिकित्सा बिज्ञानको लागी वरदान नै साबित हुन पुग्यो । सन १९०३ मा क्युरीले विद्यावारिधी पुरा गर्दै रेडियो एक्टिभीटीको खोजमा सफलता पाउँदै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भइन । उनले पुरस्कार पाउने सिलसिलालाई कायम राख्दै सन १९११ मा रसायन बिज्ञानको क्षेत्रमा रेडियमको शुुद्धिकरण (आइसोलेसन अफ प्योर रेडियम) को लागी रसायन शास्त्रको नोबेल पुरस्कार जित्न सफल भइन ।
भौतिक बिज्ञान र रसायन बिज्ञान दुबै क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र पहिलो बैज्ञानिक क्युरी आफ्ना दुई छोरी आइरिन (१९३५ मा रसायन बिज्ञान नोबेल पुरस्कार बिजेता)) र इब (१९६५ मा शान्तीको लागी नोबेल पुरस्कार प्राप्त )लाई यस संसारमा छाडदै ४ जुलाई १९३४ मा यस संसारबाट बिदा लिइन ।
प्रस्तुती : दीपेन्द्र पाण्डे
← साहित्यकार स्पन्दन को अध्यक्षतामा अनेसास पोर्चुगल को नया कार्यसमिति गठन।
हुवाइले कहिल्यै पनि गुगलको सहारा पाएन →